Full Solutions nyefee Data ọ bụla na ekwentị na New iPhone 7 / iPhone 7s
N'oge ọ bụla ugbu a Apple ga-ewebata na ukara tọhapụ ụbọchị nke ọhụrụ iPhone 6s (Plus). Ọ bụla Apple na iPhone ofufe ga-enwe obi ụtọ dị ka nke ụwa a. Ndị mmadụ ga-amalite obon ego na-achọta onye nwere ike ha na-enye ma ọ bụ na-ere ha n'oge na-adịghị na-abụ ochie iPhone. Ma, ọtụtụ ọrụ ichefu banyere otu ihe - ha faịlụ. Ha ga-nyefee ha faịlụ site na ha ochie iPhone n'ụzọ ụfọdụ.
Na na na, otú ahụ, i nwere ike ndabere niile nke gị faịlụ ka iCloud. Ma ọ bụ, ị pụrụ kwado ha elu na gị na iTunes. Ma, nke a nwere ike ịbụ ndị dị otú ahụ a ikpuru. Ọ na-ewe gị ogologo oge ike backups. Na, mgbe ị mepụtara nkwado ndabere na mpaghara ọ bụ nnọọ ike ịbụ na i nwere otutu backups ugbua. Ya mere, olee otú ị na-ahọrọ nri otu? Ma, ihe kacha njọ na nwere ike ime bụ na ị na overwrite ihe atụ, gị iTunes backups mgbe ị jikọọ ọhụrụ gị iPhone 6s (Plus) na kọmputa. Nke ahụ gaara abụwo a n'efu, ọ bụghị ya?
Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ọrụ ga na-amasị enwe ike ịnyefe data ọ bụla na ekwentị ọhụrụ ha iPhone 6s (Plus). N'ụzọ dị mwute, ọhụrụ iPhone ga-enweghị Bluetooth, otú kpọmkwem transfer agaghị ekwe omume. Ma, ọrụ ike nyefee data si ọzọ na ekwentị ha na kọmputa na mgbe nyefee data si ha na kọmputa na-iCloud ma ọ bụ iTunes. Ma, nke a na-ama na-ada otú mgbagwoju anya, na ọtụtụ ọrụ na-adịghị ọbụna nsogbu agbalị ya.
Nyefee data ọ bụla na ekwentị na iPhone 6s (Plus)
Ma, ihe ọ bụrụ na anyị gwara gị na a ụfọdụ omume dị, nke na-enyere kpọmkwem transfer ọ bụla na ekwentị ọhụrụ iPhone 6s (Plus). Yeah, ekwentị na-adịghị ọbụna si ma, ma a usoro nnọọ ike nke na ọ ugbua na-akwado ndị ọhụrụ version nke iOS (nke bụ ugbu a na beta). Nke a na usoro a na-akpọ Wondershare MobileTrans.
Wondershare MobileTrans Bụ usoro ihe omume nke-enye gị nyefee kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, videos na ngwa site Android, Blackberry ma ọ bụ Nokia (Symbian) ekwentị na gị na iPhone. Ihe ozugbo-eji na-abụ ogologo usoro nwere ike ugbu a na-eme ya otu Pịa. Ma, Wondershare MobileTrans nwere ụzọ ihe nhọrọ karịrị nanị ebufe data si otu ekwentị ọzọ. Lee ụfọdụ n'ime ha:
Ndabere a ekwentị gị na kọmputa na mgbe ahụ weghachi ndabere ka ọ bụla ọzọ na-akwado ngwaọrụ.
Wondershare MobileTrans Pụrụ inyere gị aka na-niile nke gị data chekwaa ya.
Weghachite ẹdude backups ka akwado ngwaọrụ.
Nyefee data si iTunes ndị ọzọ na-akwado ngwaọrụ.
Weghachite data si iCloud ndabere ka Android.
Na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ.
Wondershare MobileTrans Akwado ihe karịrị mmadụ 3,000 igwe na dị iche iche na netwọk. Ọzọkwa, a omume na-enye gị ikike na-adịgide adịgide na ntukwasi-obi ihichapụ data site na ekwentị gị, na-enweghị ike na-agbake mgbe ọzọ. Nke a na atụmatụ pụrụ nnọọ ịdị na bara uru mgbe ị na-ere na ekwentị gị, ma ọ bụ na-enye ya onye.
Na-agụ ịhụ otú iji Wondershare MobileTrans nyefee data ka iPhone 6s (Plus) ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-akwado ngwaọrụ.
Nyefee data si ochie Nokia / iPhone / Android ekwentị ọhụrụ iPhone 6s (Plus)
Ugbu a, ka anyị gosi gị otú ị dị mfe ọ bụ nyefee data site na otu ekwentị ọzọ iji Wondershare MobileTrans.
Nke mbụ niile, gị mkpa na-agba ọsọ Wondershare MobileTrans. Mgbe ị na-eme otú ahụ, pịa Malite ịbanye ekwentị na ekwentị transfer window. Mgbe ahụ, jide n'aka na jikọọ ngwaọrụ abụọ. Ngwaọrụ ị chọrọ nyefee data site na ngwaọrụ ị chọrọ nyefee data. The ngwaọrụ nwere ike ịbụ Android, iOS ma ọ bụ Symbian. Iji jikọọ na ngwaọrụ, jiri USB cables ị nwetara na ha. Ozugbo ngwaọrụ jikọọ MobileTrans ga chọpụta ha. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọpụta na-esonụ window.
Ọ bụrụ na ị ntị, ị ga-achọpụta na data site na isi iyi ekwentị na depụtara na n'etiti ihuenyo. Ị nwere ike ịhọrọ ihe data ị ga-nyefee. Ị nwere ike họrọ ihe niile data ma ọ bụ ma eleghị anya, photos naanị. Mgbe ị na-eme na nhọrọ usoro, pịa na 'Malite Copy' button. All họọrọ data ga-depụtaghachiri ka ebe ekwentị.
Biko, buru n'uche na kalenda-apụghị kpọfere na site na ekwentị Nokia.
Voila! Nke ahụ bụ ya. Nyefee data site na otu ngwaọrụ ọzọ dịtụbeghị mfe tupu.
Nyefee data si Kies / iTunes / iCloud / Blackberry ndabere ka ọhụrụ iPhone 6s (Plus)
Ugbu a anyị gosiri gị otú mfe ọ bụ nyefee data site na otu ekwentị ọzọ, ka anyị na-egosi gị otu ihe. Oge a, anyị ga-elekwasị anya na nkwado ndabere na mpaghara transfer ka a ụfọdụ ngwaọrụ. E nwere ụzọ abụọ mezuo nke a. Mbụ ụzọ na-agụnye ebufe data si iCloud ọzọ ngwaọrụ. Nke abụọ ụzọ ga-egosi gị otú nyefee data na kọmputa gị, iTunes ma ọ bụ ọbụna Kies ndabere ngwaọrụ gị.
1. Nyefee Data si iCloud ka na ngwaọrụ ọzọ
Nke mbụ niile oghe Wondershare MobileTrans na anya maka iCloud akara ngosi. Iji malite usoro, i kwesịrị pịa ya otú i nwere ike itinye 'Weghachi si iCloud' ndabere mode. Usoro ihe omume ga-arịọ gị ịbanye gị iCloud akaụntụ data. Echegbula onwe gị, Wondershare ga-mgbe-azọpụta gị Apple ID ọ bụ paswọọdụ.
Iji weghachi iCloud ndabere ị ga-mkpa ibudata ya.
Mgbe download okokụre, jikọọ gị iche ngwaọrụ. Họrọ faịlụ na ị chọrọ nyefee na pịa na 'Malite Copy' button.
Ọ bụ ya. The dum usoro kọwara di na nwunye nke ahịrịokwu.
2. Nyefee Data si Computer / Kies / Blackberry ndabere
Ikpeazụ a nkuzi bụkwa dị mfe dị ka otu, abụọ, atọ!
Nke mbụ niile, na-enwe ike iji weghachi a ndabere, ị ga-mkpa kwado ihe elu mbụ. Na-agba ọsọ MobileTrans mgbe ngwaọrụ ị chọrọ ndabere na jikọọ na kọmputa site na eriri USB. Họrọ "ndabere ekwentị gị" nhọrọ ke ufọk menu. Ịhọrọ data na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara, na MobileTrans ga ndabere data unu họọrọ. Ma ọ bụ i nwere ike na-weghachi ndabere si Kies ma ọ bụ Blackberry ndabere ka ekwentị gị.
Iji weghachite kwadoo data ịhọrọ 'Weghachi Site Backups' nhọrọ si Home NchNhr mgbe gị jikọọ ekwentị na kọmputa. Mgbe ahụ, họrọ a ndabere faịlụ Ọkpụkpọ. Mgbe ị chọta chọrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ị chọrọ iji weghachi ọhụrụ gị iPhone 6s (Plus), pịa 'Malite Copy' nyefee ọdịnaya si ndabere faịlụ ka iche na ekwentị.
> Resource> iPhone> Full Solutions nyefee Data ọ bụla na ekwentị na New iPhone 6s (Plus)